Umthandazo wokuphilisa ukubuyisela impilo yakho ngokukhawuleza. ?
Ukuphilisa umthandazo ukuze uphile ngokukhawulezaKwafika ke ukuncedisa amayeza amadoda. Ngokuthandaza, intswelo yakho iba namandla ngakumbi kuThixo, oya kufumana eyona ndlela ilungileyo yokukuphilisa.
Olu nyango lusenokuthetha ugqirha ongcono, umzekelo. Ngamanye amaxesha, isenokuvela kukufunyanwa konyango okanye amayeza amatsha. Ukuphilisa kunokuza nangommangaliso.
Nangona kunjalo, ukuze kwenzeke oku, kuyimfuneko ukwenza umthandazo wokuphilisa ngamandla akho onke kwaye uhlale uqinile elukholweni ukuba ungaphuma kule meko. Ithemba lokucinga sisixhobo esihle ngokuchaseneyo nasiphi na isifo.
1 Ukuphilisa umthandazo ukuze uphile ngokukhawuleza
3 Isifo sokuNyanga isifo
4 Umthandazo onamandla wokuphilisa
5 Ukuthandazela impilo yomntu.
6 Umthandazo kwiNgelosi enkulu i-Holy Raphael ukucela ukuphiliswa kwesi sifo
7 Umthandazo kwiNkosikazi yethu yeFatima ukuba ubuze impilo.
8 Ukubaluleka komthandazo wokuphilisa
Nangona oogqirha sele bewavulile amehlo abo kumathuba amancinci okuphilisa, akukho nto ayinakwenzeka kuThixo.
Ngomthandazo wokuphilisa unokuba nommangaliso kwaye uphelise isifo esikwenza ukuba uhlupheke kakhulu.
Ukongeza kwiNdumiso 133 kunye nomthandazo weengelosi enkulu uRaphael, esele sibonisile apha, zikho nezinye imithandazo enamandla yokuphilisa. Jonga phantsi.
“Nkosi Bawo, ungugqirha. Ubanika ubomi kunye nobomi abo bakufunayo.
Kungenxa yoko le nto namhlanje, Nkosi, ngendlela ekhethekileyo, ndifuna ukucela unyango lwezo zonke iintlobo zezifo, ngakumbi ezo ezindikhathazayo ngeli xesha.
Ndiyazi ukuba awufuni ububi, awusifuni esi sifo ukungabikho kwempilo, kuba ungoPhakamileyo Olungileyo.
Sebenza kum uphiliso olunzulu lokomoya kwaye, ukuba uyafuna, nako ukuphiliswa ngokwasemzimbeni.
Makwenziwe ngokuthe ngqo isenzo esinamandla soMoya oyiNgcwele wakho okanye ugqirha kunye namayeza!
Yandisa ukholo lwam kuMandla aKho, Nkosi, naseLuthandweni infinito ondenzele yona. Yandisa ukholo lwam, Nkosi, ngamanye amaxesha elibuthathaka kakhulu.
Ndiyakholelwa kumandla akho okuphilisa, Thixo wam, kwaye ngokuthobeka ndiyabulela kuwo wonke umsebenzi owenzayo entliziyweni nas nasemzimbeni ngoku. Amen, makube njalo!
Isifo sokuNyanga isifo
“Nkosi, ndiphe impilo emzimbeni wam kwaye ndiyakwazi ukusebenzisana nobomi bokuziphatha kakuhle ukuba ndilufanele uncedo lwakho.
Nkosi, ngokukuhlonipha kwaye ndikwazise enkosi nasezindumisweni, ukuba undicebisa kangakanani, ngaphandle kokundiyeka ndiphulukane nezinto endizifunayo, ndithweswe isithsaba ngempumelelo enkulu lonke uhambo olungahlali lula.
Xa ndikubulela ngobubele obunjalo, ndiyabulela kuwe, Nkosi, kungekuphela ngamazwi, kodwa ngaphezulu kwako konke nobomi obungcwele.
Wena wohlwaya abo ubathandayo, njengotata ohlwaya unyana onemvukelo amgcinileyo, ndiyabulela ngawo onke amaxesha endiye ndakuva ubunzima xa ndisiva isandla sakho sisiwela kum, kodwa ugcwele inceba.
Ndingakanani ukuba ndifunde kwaye ndafunda kuwe, tata!
Akukho nto inokulinganisa uthando lwakho.
Iindlela zabo zihlwayelwa zininzi, kodwa ngabantu abahamba kuzo kuphela abanokuva uyolo olwahlukileyo. ”
Umthandazo onamandla wokuphilisa
“Nkosi Yesu, ndicinga ukuba uvukile kwaye uyaphila. Ndicinga ukuba ukho kwisakramente yesibingelelo ukuze undondle; Ndicinga ukuba uphendula imithandazo yabo bonke abo bakufuna ngokusuk 'entliziyweni. Ndiyakuthanda, ndiyakudumisa. Ndiyabulela enkosi ngokuthanda abantu.
Akukho mntu ulityelweyo nguwe, uyinzaliseko yobomi bam, kuba sixolelwe wena, ngoncedo lwakho ndindwendwela uxolo nempilo. Ngamandla akho ndivuselele. Zisikelele iimfuno zam kwaye ube nobubele kum.
Ndiphilise, Nkosi Yesu. Ndiphilise umoya wam, ngokunqoba kwisono. Ndiphilise iimvakalelo zam, uvale amanxeba abangelwa ngamanxeba am, inzondo, ukukhathazeka okanye ukukrwada.
Ndiyaphilisa umzimba wam, undinika impilo yam yomzimba.
Namhlanje, Nkosi, ndibonisa kuwe izifo endikuzo: (sitsho ngokuthetha isifo sakho) kwaye ndiyakucela ukuba ukhululeke, njengabo babekufuna xa wawusemhlabeni wethu.
Ndiyakholelwa ukuba iLizwi liyathembisa: Yena ngokwakhe wathwala izono zethu emzimbeni wethu emthini, ukuze sife kwizono size siphile Ubulungisa; ngamanxeba akho uye waphiliswa. '(1 Pdr 2,24).
Ndiyathemba ukuba uyandithanda, kwaye nangaphandle kwesicelo sam, ndiyangqinisisa ngokholo: Ndiyabulela, Nkosi Yesu, ngentsikelelo osele undithululela yona.
Ukuthandazela impilo yomntu.
“Nkosi yendalo iphela, umenzi wezinto zonke.
Ndiza phambi kobukho bakho ngeli xesha ukuza kucela uncedo kwabo baneengxaki zomzimba okanye zengqondo.
Siyazi ukuba ngokugula sinokuba namaxesha okubonakalisa, okusithanda kakhulu, ukusisondeza kuwe, ngeendlela zokuthula.
Kodwa sibhenela kwinceba yakhe kwaye simcele: athabathe isandla sakho esikhanyayo kwabo bagulayo, abava iintlungu, ukungaqiniseki kunye nokusikelwa umda.
Vumela ukholo kunye nokuthembela kuqinise ezintliziyweni zakho. Iyabanciphisa iintlungu zabo kwaye ibanike uxolo nokuzola.
Philisa imiphefumlo yabo ukunceda ekubuyiseleni imizimba yabo.
Babanike intuthuzelo, ukukhululeka kunye nokukhanyisa ukukhanya kwethemba ezintliziyweni zabo, ukuze, ngenkxaso yethemba nokholo, babe nokuziva uthando lwendalo iphela.
Uxolo lwakho malube nathi sonke.
Umthandazo kwiNgelosi enkulu i-Holy Raphael ukucela ukuphiliswa kwesi sifo
«S. URafael, ogama lakhe lithetha "ugqirha kaThixo," wena, owayetyholwa ngokukhapha uTobias oselula kuhambo lwakhe lokuya kwilizwe lamaMedi, nowathi ekubuyeni kwakhe waphilisa ubumfama bukatata kaTobias.
U-Raphael oNgcwele, Wena oye wanceda notata kaTobias wenza iminqweno kunye neminqweno yakhe ukuba izaliseke, siyakucela ndicela uncedo lwakho.
Yiba ngumkhuseli wethu phambi koThixo, kuba ungugqirha onobubele othumela abathembekileyo.
S. Rafael, ndinyange nasiphi na isigulo.
Ngalo lonke ixesha ndiphile impilo, kuba ngekhe siyeke ukunihlangula. Enkosi
Thandaza ku-Bawo Wethu, uMzukisi uMariya kunye noCred.
Umthandazo kwiNkosikazi yethu yeFatima ukuba ubuze impilo.
“Inenekazi likaFatima, Umama onothando wabo bonke ababandezeleka emzimbeni nasemphefumlweni.
Yinyamekele impilo yabantwana bakho, ukhulule iintlungu ezisihluphayo kunye nokusiphazamisa nokusenza buthathaka.
Cela unyana wakho amthandayo ophilise abantu abaninzi abagulayo ngeendlela zexesha lakhe, ukuba abe nobubele kuthi, abe namandla ethu. Ukubandezeleka kwethu makube kuye. Ngamana uThixo angasinika impilo ukuze simkhonze rhoqo, sikhathalelana. Kodwa ngaphezulu kwayo yonke le nto, ukuba kwenziwe ukuthanda kukaThixo uBawo, osikhathalela ngothando olungapheliyo nangobubele obungathethekiyo. Sibambe ngesandla, mama othandekayo, uze nathi kuYesu.
Ukubaluleka komthandazo wokuphilisa
Xa sigula, nokuba singokwasemzimbeni, ngokomoya okanye ngokwengqondo, siwela umda ngokuphelelwa lithemba. Esi sigulo siyasibetha xa kukho umntu esimthandayo oneengxaki zempilo. Ngala maxesha, ukwazi ukuba sinomntu ekufuneka ajike asinike isiqabu.
UThixo akaze abashiye abantwana bakhe. Ke ngoko, ukubaluleka Umthandazo wokuphilisa kukuba usinika intuthuzelo. Lo mthandazo uzisa ukuzola kunye nethemba kula maxesha obunzima.
Amaxesha amaninzi sizifumana siphambi koThixo singazi ukuba sizakucela njani ukuphiliswa kwethu, loluphi ulwimi ukuba silusebenzise. Umthandazo wokuphilisa uzisa amagama afanelekileyo, ukuba athethe ngokholo, aya kuba namandla amakhulu okusiphilisa.
Yonwabela ukuntywiliselwa kumthandazo wokuphiliswa ukuze ufumane impilo kwakhona kwaye ufunde ngakumbi ngazo zontathu iindidi ezikhoyo.